USamantha Forlow, uMbhali kwi-Funda ukurhweba
umbhali: USamantha Forlow
USamantha Forlow ngumphandi wase-UK, umbhali, kunye neengcali zezezimali. Njengebhlog, injongo yakhe kukwenza lula izihloko zezemali zakhe njengoko exhobisa abafundi ngolwazi olubalulekileyo olususela kwimali yendalo kunye nokuxhasa ngemali utyalo-mali ukuya kurhwebo lwe-forex kunye neCFD. Ukutyhubela iminyaka uSamantha ubonakalisiwe kupapasho lwezemali.
Ngamanye amaxesha kubhekiswa 'njengento ebangela isenzo', iimpawu zesitokhwe zibonelela ngeengcebiso eziluncedo kumathuba okurhweba anokuba nengeniso. Ngamanye amazwi, uya kuxelelwa ukuba yeyiphi imiyalelo yokubeka kwintengiso efanelekileyo - ngokusekelwe kuhlalutyo olunzulu lobugcisa okanye olusisiseko olwenziwa ngumboneleli wesignali. Ngaba ujonge ezona mpawu zintle zesitokhwe zabaqalayo? Ukuba […]
Iqela leTelegram yeempawu ze-Forex inokuthatha iinzame zakho zokurhweba ngemali ziye kwinqanaba elilandelayo. Uya kufumana iingcebiso zokurhweba onokuthi uzikope kwiTelegram ukuya kwiMT4. Ezi ngcebiso zokurhweba ziya kuchaza ukuba yeyiphi ukuthenga / ukuthengisa, ukungena, kunye nokuphuma kweodolo ekufuneka uyibeke - kwaye ngawaphi amaxabiso. Oku kukuvumela ukuba uzuze kwi […]
Uninzi lwethu ubuncinci luye lwacinga ngokutyala imali kwii-cryptocurrensets. Inyani yile yokuba abantu abaninzi babekelwa ecaleni kukusilela kommiselo, kunye namabali ayoyikisayo ezipaji ziqhekezwa zii-cryptojackers. Iindaba ezimnandi zezokuba kukho iindawo zokujika - ke kwesi sikhokelo, sithetha ngento eyenza […]
Ukuba ujonge i-broker ekwi-intanethi ukurhweba i-forex, izitokhwe, izinto ezithengiswayo, ii-cryptocurrencies, kunye nokunye-inokuba kufanelekile ukuba uthathele ingqalelo i-FBS. Lo mthengisi udumileyo weCFD ubonelela ngezona ntlawulo zibalaseleyo zokurhweba kule ndawo yentengiso- ecaleni kweentlobo ezininzi zeakhawunti kunye namaqonga onokukhetha kuwo. Kolu phononongo lweFBS, sigubungela yonke into apho […]
Nangona isiqalo esithobekileyo njenge-satirical meme token, i-Dogecoin ngoku ibonwa ngabahlalutyi beemarike njengesisombululo sokuhlawula esisemthethweni. Ukuthenga iithokheni ze-DOGE, kungcono ukujoyina i-brokerage ephezulu. Ukuqalisa, funda esi sikhokelo malunga nendlela yokuthenga i-Dogecoin kwaye ubhalise kunye nomthengisi. Uya kufumana uphononongo olugubungela eyona […]
U-Solana uye wafumana ukukhula okugqithiseleyo ukususela ekuqaleni kwe-2021. Ngaloo nto, eli shishini liyaziwa ngokuguquguquka, ngoko ke indlela efanelekileyo yokufikelela kwiithokheni ze-SOL ngokusebenzisa i-broker elawulwayo nethembekileyo. Namhlanje, sikuthatha kwinkqubo yokuthenga iSolana ngaphantsi kwemizuzu eli-10, ecaleni kokujonga ngokukhawuleza […]
I-MetaTrader4 (MT4) lelona qonga lokurhweba lifunwa kakhulu kwindawo ye-forex yehlabathi- ubuncinci kuba iza nezixhobo eziphambili kunye neempawu ezikunika elona thuba lihle lokuqikelela imarike. Oku kugubungela yonke into ukusuka kwizalathi zobuchwephesha kunye nezixhobo zokuzoba itshathi kwii-simulators kunye neendidi zoku-odola ngokwesiko. Nangona kunjalo, ukuba […]
I-Cosmos luthungelwano olunabileyo nolusebenzisanayo. Oku kuthetha ukuba amathokheni e-ATOM kunye nedatha inokudluliselwa phakathi kweebhloko ezahlukeneyo. Namhlanje, siza kutyhila iinkcukacha ezintle zendlela yokuthenga iCosmos. Uya kufumana uphononongo olucokisekileyo lwelona qonga lilungileyo lokufikelela kwiithokheni ze-ATOM ngononophelo, kunye nendlela yokubhalisa […]
I-Tether yitokenized adaptation yemali egciniweyo yehlabathi, idola yaseMelika. Ngokungathandabuzekiyo, yeyona stablecoin iyaziwa kakhulu kwaye ithengiswe kwindawo ye-cryptocurrency. Kwisikhokelo sanamhlanje, sijonga indlela yokuthenga iTether - ebandakanya ukubhalisa ngenyathelo ngenyathelo kunye nomthengisi, kunye nophononongo lwelona qonga lilungileyo lomsebenzi okhoyo. […]
I-VeChain isebenzisa iteknoloji ye-blockchain ukuguqula ukucaca kunye nokusebenza kakuhle kwikhonkco lokubonelela ngamacandelo amaninzi. Oku kunokubonisa amandla amakhulu okukhula kwixesha elizayo kweethokheni zeVET. Ukufunda ubuchwephesha bendlela yokuthenga iVeChain - funda. Kwesi sikhokelo, sijonga elona qonga lilungileyo lokufikelela kwiVET […]